တိုင်ဖွန်း KETSANA ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လျှက်ရှိ | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
တိုင်ဖွန်း KETSANA ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လျှက်ရှိ
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း KETSANA သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ကမ်းရိုးတန်းကို ပြင်းအား CAT-2 ဖြင့် စတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နေပြီဖြစ်ရာ မြန်မာစံတော်ချိန်ဖြင့် နေ့လည် ၁၂း၃ဝ နာရီခန့်(0600GMT)တွင် မုန်တိုင်းမျက်စေ့ ကျော်ဖြတ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂း၄၅ နာရီတွင် ရရှိသော ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံအရ မုန်တိုင်းမျက်စေ့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိနေသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ မုန်တိုင်း အရှိန်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းဒေသများနှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် တိမ်တိုက်ကြီးများဖြစ်ပေါ်လျှက် ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
အောက်တွင်ဖေါ်ပြထားသည့် ဒုတိယပုံသည် မုန်တိုင်းမျက်စေ့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ရန် ၃ မိုင်ခန့်တွင် တိုင်းထွာရရှိသော လမ်းကြောင်း ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပြီး Chu Lai လေယာဉ်ကွင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
Posted in Education, Weather Alert, Weather News. Tags: KETSANA, typhoon, weather.4Comments »
4 Responses to “တိုင်ဖွန်း KETSANA ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လျှက်ရှိ”
Please view MTSAT – animation here
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း KETSANA ဗီယက်နမ်ကို ဆက်လက်တိုက်ခတ်နေဆဲ
(မြန်မာစံတော်ချိန် စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက် ညနေ ၃ နာရီ ၃ဝ)
မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၄ နာရီ ဓါတ်ပုံ 0930GMT
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း၏ တိမ်တိုက်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းအထိရောက်ရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ပုံ၏ ညာဘက်အောက်ပိုင်းတွင် ဖိလစ်ပိုင်အနီးသို့ ထပ်မံချဉ်းကပ်လာနေသော အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PARMA ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
« တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း KETSANA ဗီယက်နမ်သို့ဝင်လုနီးပြီ
တိုင်ဖွန်း၊ အပူပိုင်းမုန်တိုင်းနှင့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းများ .. »